Dutchtown Demographics • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Sida xaafad kasta oo magaalo ah, Dutchtown waxay aragtay isbeddello xagga tirakoobka ah oo xagga dadweynaha ah 150kii sano ee la soo dhaafay. Aynu jaleecno qaab-dhismeedka dadka ee Dutchtown laga soo bilaabo maalmihiisii ​​sida miyiga bannaanka loo joogo illaa hadda.
Mid ka mid ah guryaha qadiimiga ah ee laga helay South Broadway ee Dutchtown.
Taariikhda Hore: Dhex-dhexaad la'aanta
Kahor intaan loo aqoon Dutchtown, aaggu wuxuu ka mid ahaa beeraha guud ee St. Louis waqooyiga iyo Carondelet ee koonfurta. Horumar aad u yar ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa labada magaalo Dagaalkii Sokeeye ka hor. Wadada Carondelet, oo hadda ah South Broadway, waxay ku xirmeen St. Louis iyo Carondelet iyadoo loo marayo Dutchtown.
Kaniisada St. Anthony ee Padua waxaa la aasaasay 1860. Kahor intaan la dhisin kaniisadoodii ugu horeysay ee wadada Meramec sanadkii 1864, wadaadadu waxay ku qabteen howlo Guriga Qaxootiga, oo ah xarun agoon oo ku taal dhulkaas oo noqon doonta Marquette Park. Jameecada horaantii 1860-meeyadii waxay ka koobnayd 70 qoys oo ku hadla afka Jarmalka iyo 25 qoys oo ku hadla Ingiriisiga, oo ay u dhexeeyeen 117 caruur da, doo iskuul ah.
Wadada Chippewa ee 1875, laga bilaabo Compton & Dry's Sawirka St. Louis.
Kobaca Degdega ah: Jarmalka ayaa yimid
St.Louis waxay fidisay xuduudaheeda ku darsamida Carondelet (iyo waxkasta oo udhaxeeya) sanadkii 1870. Beeraha la wadaago ayaa looqaybiyay oo looxareeyay horumarka. Muddo yar ka dib, soo galootiga Jarmalka waxay bilaabeen inay ku qulqulaan qeybaha koonfur-bari ee dhowaan laga furay magaalada balaarisay. Jarmalka, ama Jarmal, xididdo ku beeray kuna roonaaday aagga tobanaan sano. Magaca "Dutchtown" wuxuu ka yimid erayga Jarmal.
Wadada Meramec waxay dhanka galbeed ka eegtaa Avenue California sanadkii 1887.
Intii u dhaxeysay 1880 iyo 1920, Dutchtown si dhakhso leh ayey u kortay. Xaafaddu si dhakhso leh ayey u daadisay dabeecaddeeda reer miyiga ah iyadoo guryo adag oo leben ah iyo dukaamo ay ka soo baxeen hareeraha waddooyinka cusub ee waddooyinka la dhigto. Inta badan dhismayaasha weli kuyaala Dutchtown maanta waxaa la dhisay muddadan.
Xaafadu waxay sii waday inay koraan oo ay baraaraan ilaa 1950-meeyadii. Nasiib darrose, arrimuhu si dhakhso leh ayey u bilaaban doonaan inay u jeestaan ​​Dutchtown, St. Louis guud ahaan, iyo xarumaha magaalooyinka ee ku baahsan Ameerika.
Meramec wuxuu bariga ka fiirinayaa wadada Virginia Avenue sannadihii kontomeeyadii.
Isbedelada Qarniga Dhexe: Baxitaanka Magaalada hareeraheeda
Xilligii Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib wuxuu keenay isbeddello ballaaran qaabkii ay u noolaayeen Mareykanku, Dutchtown-na waxaa hubaal taabtay isbadaladaas.
Dagaalkii ka dib, rag dhalinyaro ah ayaa guryahoodii ku noqday iyagoo raadinaya inay reero abuuraan. Sharciga GI wuxuu dhiirigaliyay qoysaska dhalinyarada ah inay iibsadaan guryo xaafadaha cusub ee soo koraya ee duleedka magaalada. Xaafadaha magaalada waxay ku koreen xawaare jaban.
Khariidad dib u habayn ka socota Shirkada amaahda Milkiilayaasha Guryaha. Meelaha huruudda ah waxaa lagu xusay inay yihiin "hubaal inay sii dhacayaan" meelaha casaanka ahna waxaa loo arkaa inay "khatar ku yihiin" saraakiisha amaahda. Ka soo Khariidaynta Sinnaan la'aanta.
Haddii dhiirigelintu aysan ku filnayn, amaahda oo dib loo casuumayo bangiyada ayaa adkeeyay kuwa doonaya inay sii joogaan. Bangiyadu waxay ka labalabeeyeen inay amaah ku soo bixiyaan guryaha ku yaal xaafadda, gaar ahaan qaybaha bari ee xaafadda.
Isbeddelada tirakoobka ee aagga metro aagga St. Louis, 1950 - 1960. Khariidadaha ka socda Khariidaynta Khariidadda waxaa qoray Colin Gordon.
Dhismaha nidaamka Wadada Interstate Highway wuxuu dardar galiyay duulimaadkii aadayay xaafadaha. 1960s Interstate 55 ayaa si aan kala sooc lahayn loo kala gooyay qaybta bari ee magaalada Dutchtown, iyada oo la duminayo guryaha, xididada loo siinayo deriska, lagana jarayo bariga iyo galbeedka. Horumarinta xarunta dhexe ee ganacsiga ayaa ka leexisay ganacsiyada xaafadaha ganacsiga xaafadaha iyadoo la raacayo khadadka baabuurta, isla markaana isla markiiba baaburradii waddooyinka laftooda ayaa la waayey.
Isbeddelada tirakoobka ee aagga metro aagga St. Louis, 1960 - 1970.
Dabayaaqadii qarnigii 20-aad: Dhanka Koonfureed wuu kala duwan yahay
Ka dib dagaalladii ka dhanka ahaa xuquuqda madaniga ee lixdameeyadii, dadka midabka leh waxay heleen ikhtiyaarro dheeraad ah oo ku saabsan halka ay ku noolaanayaan magaalada. Markii hore waxaa dib loogu celiyey dhinaca u dhow Waqooyiga Side ama agagaarka Mill Creek Valley, Dadka Madow waxay bilaabeen inay ku faafaan qaybaha kale ee magaalada (in kasta oo had iyo jeer aysan ahayn xulasho, laakiin waxay u sii marayaan barokicinta waxa loogu yeero cusboonaysiinta magaalooyinka).
Isbeddelada tirakoobka ee aagga metro aagga St. Louis, 1970 - 1980.
Dhinaca Koofureed wuxuu ahaa mid si adag u cad cad inta badan taariikhdiisa, laakiin sannadihii 1970-meeyadii iyo 1980-meeyadii, Madowyaashu waxay bilaabeen inay u guuraan xaafadaha ku dhow Koonfurta Side, iyagoo qayb ahaan buuxinaya faaruqinta madama caddaanku sii waday inay u guuraan xaafadaha ku sii fidaya
Koofurta dheer, Dutchtown waxay ku hadhay dad aad u tiro badan oo Caddaan ah. Sannadkii 1980, ugu yaraan 18,000 oo deggan Dutchtown ayaa habboon, keliya 100 ka mid ah ayaa Madow ahaa. Qaarkood waxay yiraahdaan Chippewa Street wuxuu ahaa khadka kala qaybinta halkaasoo joogsiga socdaalka madow uu ku hakaday.
Isbeddelada tirakoobka ee aagga metro aagga St. Louis, 1980 - 1990.
Wareegidda Millennium: Isbeddelku wuxuu keenaa xasillooni
1990-yadii iyo 2000-yadii waxay keeneen isbeddellada dadka ee lagu arkay meelo kale oo dhinaca Koonfureed ah ilaa Dutchtown. Maaddaama qaar ka mid ah xaafadaha ku dhow Koonfurta ay bilaabeen dib-u-habeyn iyo sharaf, dadkaas barakacayaasha ah waxay isku arkeen Dutchtown guryo la awoodi karo, oo adag, oo cufan.
Isbeddelada tirakoobka ee aagga metro aagga St. Louis, 1990 - 2000.
Intii u dhaxeysay 1990 iyo 2010, Dutchtown waxay ka wareegtay 90% Caddaan waxayna u dhigantaa saamiga isku midka ah ee Madowga iyo Caddaanka. Dadka midabka leh ayaa hadda ah aqlabiyadda dadka reer Dutchtown.
Isbeddelada tirakoobka ee aagga metro aagga St. Louis, 2000 - 2010.
Qulqulka dadka madow, oo ay weheliyaan soogalootiga ka kala yimid daafaha dunida, waxay gacan ka geysteen xasilinta dadweynaha Dutchtown marka la barbar dhigo magaalada inteeda kale. St. Louis gebi ahaanba saddex meelood laba meel dadkii degenaa ayaa ka lumay tirada ugu badan ee dad ku dhow milyan qof sannadihii 1950-meeyadii.
In kasta oo xaafadaha sida Forest Park Koonfur-bari iyo Shaw ay dhiig daadinayaan dadka deegaanka, taasoo muujineysa hoos u dhac ku yimid tirada dadka ku dhowaad 70% illaa iyo 1950-meeyadii, Dutchtown waxay si toos ah u lumisay kaliya seddex meelood meel ka mid ah dadkeeda ilaa iyo 1950. Deganaanshaha dadkaan ayaa gacan ka geysatey joojinta ka tegitaanka, iyo arrimaha kale, ee ayaa lagu arkay xaafadaha kale ee magaalada.
Inkastoo FPSE iyo Shaw waxay arkeen dib-u-nooleyn la taaban karo sanadihii la soo dhaafay, in horumarka cusubi uu aad uga yar yahay cufnaantii meesha ka jirtay. Dhanka kale, Dutchtown ayaa weli ah mid ka mid ah meelaha ugu dadka badan ee magaalada St. Louis, oo hoy u ah qiyaastii 10,000 oo qof halkii kiilo mitir.
Deriska Dutchtown xafladda daahfurka Codka Guud ee Marquette Park.
Tirada dadka ee Dutchtown Maanta
Laga soo bilaabo 2017, Dutchtown habboon waxay leedahay in ka badan 16,000 oo deggane ah, taas oo ka dhigeysa xaafadda ugu weyn magaalada ee dadweyne. Ku dhowaad 11,300 oo qof oo deggan halkii mayl oo laba jibbaaran, Dutchtown sidoo kale waa mid ka mid ah xaafadaha ugu cufan magaalada. Dakhliga qoyska dhexdhexaadka ahi waa qiyaastii $ 26,000 sanadkii, isagoo dhigaya Dutchtown qeybta saddexaad ee ugu hooseysa xaafadaha. Tirada dadka ku nool Dutchtown waa dad aad u da 'yar, iyadoo qiyaastii seddex meelood meel ka mid ah dadka degan ay ka yar yihiin 18 sano.
Dutchtown waa 51.2% Madow, 26.3% Cadaan, 11.5% Isbaanish, 8.2% Aasiyaan, 2.3% jinsi isku dhafan, iyo 0.6% asal kale. Tusmooyinka kala duwanaanta, suurtagalnimada in laba qof oo aan kala sooc lahayn ah oo dadweynaha ka mid ahi ay yihiin jinsi kale, ayaa aad ugu sarreeya magaalada Dutchtown.
Dadyow kala duwan oo firfircoon ayaa ka soo baxay wixii markii hore ay u badnaayeen soo galootiga Jarmalka. Dutchtown weli waa goob derisku isugu yimaadaan si ay ugu noolaadaan, u tukadaan, wax u bartaan, uga shaqeeyaan, uga dukaameystaan, uguna xirmaan.
Kala duwanaanta waa mid ka mid ah awoodaha badan ee Dutchtown. Kaqaybqaadashada bulshada, dadaalka, iyo iskaashiga istiraatiijiga ah waxaan si wada jir ah u dhisi karnaa xaafad horumar leh, sinnaan leh.
Xogta qaar ee la isticmaalay waxaa loola jeedaa xaafadda Dutchtown sida sida gaarka ah loogu qeexay Magaalada St. Louis, iyo xogta kale waxaa loola jeedaa aagga Greater Dutchtown. Isbeddellada guud ahaan waa isku mid labada xaaladoodba, laakiin tirooyinka si weyn ayey uga duwanaan karaan. Khubaro kasta oo xog ah oo raba inay gacan ka geystaan ​​sidii xogteenu u noqon laheyd mid iswaafaqsan ayaa ka badan soo dhaweynta nala soo xiriir!
Tirooyinka tirada badan ee Dutchtown waxaa laga soo dheegtay astaamo tirakoob oo daboolaya qaybo muhiim ah oo Dutchtown, Gravois Park, Marine Villa, iyo Mount Pleasant, laakiin xaaladaha qaarkood waxay ka baxaan meelaha ka baxsan xuduudahaas. Waraaqaha la raaciyay ayaa kala ah 1153-1157, 1163.02 iyo 1164, 1241, 1243, iyo 1246. 1990-kii ka hor, trakt 1163.02 wuxuu qayb ka ahaa baaxad weyn, 1163, aaggaas oo inta badan ka baxsan aagga weyn ee Dutchtown; sidaas oo kale, tirooyinka guud ee ka hor 1990-kii waxyar baa ku buuqay.
La wadaag boggan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Boggan waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay February 10th, 2021 .
DutchtownSTL.org Ku saabsan Dutchtown Dutchtown Demographics